Do it yourself | portal │ပညာရှင် Hans Kottke
portal │ပညာရှင် Hans Kottke
Holografische Verfahren werden zunehmend auch in der Messtechnik eingesetzt, zum Beispiel in der Elektronenmikroskopie. Als Hologramm (altgriechisch γράμμα gramma, deutsch ‚Geschriebenes‘, ‚Botschaft‘), auch Speicherbild, bezeichnet man eine mit holografischen Techniken hergestellte fotografische Aufnahme, die nach Ausarbeitung und Beleuchtung mit kohärentem Licht ein echtes dreidimensionales Abbild des Ursprungsgegenstandes wiedergibt. (ဝီကီ​​ပီးဒီးယား)
ပညာရှင် Hans မင်္ဂလာပါ
Send Artikel ALS PDF ဖိုင်ရယူရန်
January 12th, 2019 | မိမိအ Kottke | Tags:: Do it yourself, Holographie.
categories: 2019, ယေဘုယျ, နောက်ခံ, အတတ်ပညာ, ဗီဒီယို | comments: အထူးပြောစရာမရှိ
26 အသုံးပြုသူများသည် အွန်လိုင်း
categories Category: ကိုရွေးချယ်ပါ 2009 (2) 2010 (52) 2011 (60) 2012 (57) 2013 (51) 2014 (36) 2015 (33) 2016 (24) 2017 (2) 2018 (22) 2019 (9) ယခု(302) ယေဘုယျ(413) Braunschweig(188) Game က(4) လင်္ကာ(16) သမိုင်း(29) နောက်ခံ(272) အင်တာနက်ကို(7) အတတ်ပညာ(32) ဆေးဝါး(52) ဗီဒီယို(104)
2011 2012 2013 2014 အာဖဂန်နစ္စတန် တောင် ကြောက်လန့် Animation ရဲ့ မှီခိုရာအဆောက်အဉီး Braunschweig အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ဆန္ဒပြ ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ် ဂျာမဏီ လက်ဝဲဘက် Empathy တို့ဖြစ်ပါတယ် အဆင့်ဆင့်ဖြစ်ပျက်ခြင်း ငြိမ်းချမ်းရေးဆုသူ Work ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့လှုပ်ရှားမှု မိဿဟာယမဟာမိတ်အဖွဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ ဂါဇာ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် လင်္ကာ သမိုင်း ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း ဂရေဂို Gysi Homo Sapiens မှ IPPNW ဣသရ ပေါင်မုန့် ဒေသခံရွေးကောက်ပွဲတွေ စစ် ဆန္ဒပြပွဲ လိမ်ညာ ဆေးဝါး လူ့အခွင့်အရေး နာဇီဝါဒထွန်း အဘိဓမ္မာ Prof.Dr.Kinkel ရေဒီယို Okerwelle ပံ့ပိုးမှုအုပ်စုတစ်စု self-အကူအညီနဲ့အုပ်စုတွေ ပတ်ဝန်းကျင် အနာဂတ်
စာရွက်စာတမ်းဟောင်းများ လကိုရွေးချယ်ပါ မတ်လ 2019 (6) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2019 (5) ဇန္နဝါရီလ 2019 (7) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (2) နိုဝင်ဘာလ 2018 (2) အောက်တိုဘာလ 2018 (4) စက်တင်ဘာလ 2018 (3) သြဂုတ်လ 2018 (3) ဇူလိုင်လ 2018 (1) ဇွန်လ 2018 (2) မေ 2018 (4) ဧပြီလ 2018 (1) မတ်လ 2018 (3) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2018 (2) ဇန္နဝါရီလ 2018 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (1) စက်တင်ဘာလ 2017 (1) သြဂုတ်လ 2017 (3) ဇွန်လ 2017 (3) မေ 2017 (2) ဧပြီလ 2017 (1) မတ်လ 2017 (1) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2017 (1) ဇန္နဝါရီလ 2017 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (2) နိုဝင်ဘာလ 2016 (2) အောက်တိုဘာလ 2016 (3) စက်တင်ဘာလ 2016 (2) သြဂုတ်လ 2016 (2) ဇူလိုင်လ 2016 (2) ဇွန်လ 2016 (2) မေ 2016 (3) ဧပြီလ 2016 (2) မတ်လ 2016 (2) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2016 (3) ဇန္နဝါရီလ 2016 (4) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (1) နိုဝင်ဘာလ 2015 (4) အောက်တိုဘာလ 2015 (3) စက်တင်ဘာလ 2015 (2) သြဂုတ်လ 2015 (4) ဇူလိုင်လ 2015 (5) ဇွန်လ 2015 (3) မေ 2015 (3) ဧပြီလ 2015 (2) မတ်လ 2015 (2) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2015 (1) ဇန္နဝါရီလ 2015 (4) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (3) နိုဝင်ဘာလ 2014 (3) အောက်တိုဘာလ 2014 (2) စက်တင်ဘာလ 2014 (1) သြဂုတ်လ 2014 (2) ဇူလိုင်လ 2014 (2) ဇွန်လ 2014 (3) မေ 2014 (6) ဧပြီလ 2014 (3) မတ်လ 2014 (3) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2014 (3) ဇန္နဝါရီလ 2014 (3) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (5) နိုဝင်ဘာလ 2013 (2) အောက်တိုဘာလ 2013 (7) စက်တင်ဘာလ 2013 (6) သြဂုတ်လ 2013 (5) ဇူလိုင်လ 2013 (8) ဇွန်လ 2013 (3) မေ 2013 (4) ဧပြီလ 2013 (4) မတ်လ 2013 (5) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2013 (3) ဇန္နဝါရီလ 2013 (4) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (7) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1) အောက်တိုဘာလ 2012 (2) စက်တင်ဘာလ 2012 (7) သြဂုတ်လ 2012 (2) ဇူလိုင်လ 2012 (6) ဇွန်လ 2012 (6) မေ 2012 (6) ဧပြီလ 2012 (9) မတ်လ 2012 (7) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2012 (3) ဇန္နဝါရီလ 2012 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (3) နိုဝင်ဘာလ 2011 (8) အောက်တိုဘာလ 2011 (5) စက်တင်ဘာလ 2011 (6) သြဂုတ်လ 2011 (2) ဇူလိုင်လ 2011 (2) ဇွန်လ 2011 (6) မေ 2011 (8) ဧပြီလ 2011 (5) မတ်လ 2011 (6) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2011 (6) ဇန္နဝါရီလ 2011 (5) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (4) နိုဝင်ဘာလ 2010 (6) အောက်တိုဘာလ 2010 (7) စက်တင်ဘာလ 2010 (11) သြဂုတ်လ 2010 (3) ဇူလိုင်လ 2010 (4) ဇွန်လ 2010 (5) မေ 2010 (10) ဧပြီလ 2010 (10) မတ်လ 2010 (4) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2010 (9) ဇန္နဝါရီလ 2010 (8) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (14)
… RSS feed အဖြစ် subscription ဤ blog …
ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ Braunschweig e.V.
INKOTA network ကို e.V.
Pro ကို Asyl
RSS ကို – လက်ဝဲဘက်
RSS ကို – medico အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ
Selbsthilfegruppe ကြောက်ရွံ့သေ​​ာသဘောသည် & ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ် Braunschweig
Skype ကို-Status ကို
» Skype ကိုစို့, အခမဲ့တယ်လီဖုန်း!
ဆိုက်ကိုမာတိကာ: ©2019 portal │ပညာရှင် Hans Kottke
Wordpress ကိုအဓိကအကြောင်းအရာ: ©အဆိုပါဖွင့်ပါသင်ယူဗဟိုဌာန
Tue Jul 16th 7:00:53 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန် 2019
ဤ site ကိုလုပ်ကိုင် Wavatars plugin ကို Shamus လူငယ်တို့အားဖြင့်.